Corkwood - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Corkwood
Corkwood ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
scopolamine (အမူးသက်သာစေသောဆေး) ကို စီးပွားဖြစ်မထုတ်လုပ်မီက corkwood အပင်ကို လှုပ်ရှာနေသောအရာကြောင့် (ကားမူးခြင်း စသည်) မူးခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း များကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုသည်။ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းကျုံ့ခြင်းကို သက်သာစေရန်လည်း အသုံးပြုကြသည်။
ဘေးကင်းစိတ်ချရမှုကို မသေချာသော်လည်း corkwood ပင်ကို ဆေးရွက်ကြီးငုံသကဲ့သို့ ဆာလောင်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ နှင့် မောပန်းခြင်းများကို သက်သာစေရန် ဝါးစားကြသည်။
ဤဆေးပင်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး လုံလောက်သော လေ့လာမှုများမရှိသော်လည်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ သို့သော် ပင်တွင် ပင်မအာရုံကြောကို သက်ရောက်မှုရှိစေသော ဓါတုပစ္စည်းများပါဝင်ကြောင်း အချို့သော လေ့လာမှုများက တွေ့ရှိထားသည်။ ထိုအရာများထဲမှ တစ်ခုသည် လှုပ်ရှားမှုကြောင့် မူးဝေခြင်း၊ အန်ခြင်းကို သက်သာစေသော ဆေးတစ်မျိုးနှင့် ဆင်တူပြီး အိပ်ချင်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အခြားသော ဓါတုပစ္စည်းသည် မျက်လုံးသူငယ်အိမ်ကို ကျယ်စေသော ဆေးနှင့်တူပြီး ကြွက်သားလှုပ်ခြင်းကို သက်သာစေသည်။
Corkwood အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ပင်မှ ထွက်ကုန်များကို အလင်းရောင်နှင့် စိုစွတ်သောနေရာတွင် မထားရပါ။
လူနာကို ပါးစပ်ခြောက်ခြင်း သက်သာစေရန် သကြားလုံးစားရန်၊ အရည်များသောက်ရန် နှင့် ပီကေစားရန် အကြံပေးပါ။
ဆေးပင်ကို အသုံးပြုနေစဉ် စောင့်ကြည့်ရမည်များမှာ
•	စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ (စိတ်ခံစားမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း)
Corkwood က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ဤဆေးပင်ကို ကိုယ်ဝန်ရှိနေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးမပြုရပါ။ ကလေးများကိုလည်း မပေးရပါ။ ဆေးပင်ကို ဓါတ်မတည့်သူများနှင့် မျက်စိရေတိမ်ဖြစ်သူများ၊ ကြွက်သားရောဂါရှိသူများ၊ နှင့် အစာအိမ်လမ်းကြောင်းပိတ်သူများ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်သူများတွင် အသုံးမပြုရပါ။
နှလုံးရောင်ပြီး နှလုံးမကောင်းသူများ၊ ဆီးကျိတ်ကြီးသူများ၊ သွေးတိုးရောဂါရှိသူများ၊ နှလုံးတုန်ခြင်း၊ အစာအိမ်အနာရှိသူများတွင်လည်း အသုံးမပြုရပါ။
Corkwood ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
•	စိတ်ရှုပ်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ခြင်း၊ စိတ်တိုစိတ်ဆတ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ မျက်နှာနီခြင်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း။
•	ရင်တုန်ခြင်း၊နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ ထလိုက်လျှင် မူးခြင်း။
•	မျက်လုံးဝါးခြင်း၊ အမြှေးပါးများခြောက်ခြင်း။
•	ပျို့အန်ခြင်း၊ အစားပျက်ခြင်း၊ ပါးစပ်ခြောက်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း။
•	ဆီးမထွက်ခြင်း၊ ဆီးကျန်ခြင်း။
Corkwood ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
ဤဆေးပင်သည် အောက်ပါတို့နှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်သည်။
•	အရက်၊ ယားယံမှုကို သက်သာစေသော ဆေးများ၊ မူးယစ်ဆေး၊ phenothiazines, tricyclics;
•	ပါကင်ဆန်ရောဂါကို ကုသောဆေးများ
•	နှလုံးဆေးများ Beta-blockers, cardiac glycosides
Corkwood အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Corkwood က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Skidmore-Roth, Linda. Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version.
Corkwood tree. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 461-corkwood%20tree.aspx?activeingredientid=461&activeingredientname=corkwood%20tree. Assessed August 7, 2016.Skidmore-Roth, Linda. Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version.
Corkwood tree. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 461-corkwood%20tree.aspx?activeingredientid=461&activeingredientname=corkwood%20tree. Assessed August 7, 2016.